That's so good, right?: April 2014
My God, he is hot!!!! နေ့တစ်နေ့ရဲ့အစ စာသင်ခန်းထဲမ၀င်ခင် အခန်းအပြင်မှာ ကျွန်တော်ထိုင်နေတုန်း ဘယ်တစ်ဦးတစ်ယောက်ကို မှ သတိထားဂရုစိုက်မိတာတွေ လုံးဝမရှိ။ အေးအေးဆေးဆေး ဖတ်စရာရှိတဲ့စာအုပ်တွေကိုသာ ဖတ်နေမိရော။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်တို့ကျောင်းရဲ့ counselor ဦးတင်ထွေးနှင့်အတူ လမ်းလျှောက်လာသော သူ့ကိုမြင်တော့ မျက်လုံးများပင်ပြူးသွားမိပါရဲ့။ ကျောထဲစိမ့်သွားမိတဲ့အထိ ခံစားရပါတယ် သူ့ကိုမြင်ရကြည့်ရတာနဲ့တင်လေ။ စိုက်မကြည့်မိဖို့ ဘယ်လိုမှ ထိန်းထားလို့မရဘူးဗျာ။ မရောင်မလည်နဲ့ ဦးတင်ထွေးကိုင်ထားတဲ့ ကျောင်းသားform ကိုပခုံးပေါ်ကနေကျော်ကြည့်လိုက်တော့ သူ့နာမည်က ဘိုဘိုတဲ့။ ဦးတင်ထွေးက ကျွန်တော်တို့တန်းခွဲတစ်ခုလုံးနှင့် သူ့ကိုမိတ်ဆက်ပေးတယ်ဗျ ကျောင်းသားဟောင်းတွေနဲ့ ၀ံ့ရဲစွာပေါင်းသင်းဆက်ဆံလို့ ရအောင်ထင်ပါတယ်။
သင်္ချာချိန်မှာ ဆရာက ပုစ္ဆာတွေရဲ့ အမေးအဖြေ သဘောသဘာဝရှင်းပြတာကို နားထောင်ရင်း ကျွန်တော် ဘိုဘို့ကို အာရုံစိုက်သတိပြုမိ ပါတယ်။ fuck….သူကတော်တော်ကြည့်လို့ကောင်းတာပဲဗျာ။ အရပ်အမြင့်က အနည်းဆုံး ၆ပေလောက်မြင့်မယ်။ ပြီးတော့ မျက်ဝန်း တွေက ရွှန်းလဲ့တောက်ပနေကာ ဆံနွယ်တွေက အညိုနုရောင်ခွေလိပ်လိပ်လေးတွေနဲ့။ သူ့ခန္ဓာကိုယ်က တကယ့်ကို ကောက်ကြောင်း လှတာ ကြွက်သားမြှောင်းတွေတောင်ထင်းလို့။ ရုတ်တရက် ကျွန်တော်သူ့ကိုကြည့်နေတာရိပ်မိသွားလို့ထင့် ကျွန်တော့် မျက်နှာဆီ အကြည့်ရောက်လာတာကြောင့် မျက်လုံးအကြည့်ကိုခပ်မြန်မြန် ရွှေ့ထားလိုက်ရပါတယ်။ သူ ဒီအဖြစ်ကိုလုံးဝသတိမမူမိသွားပါဘူး။ ကျွန်တော်အခုထိ bi ဖြစ်နေတုန်းပါ။ ကောင်မလေးတွေကိုလည်း ချစ်တယ်၊ကောင်လေးတွေကိုလည်း သဘောကျနေဆဲပါ။ ဘိုဘို ကတော့ ကျွန်တော့်အတွက် လုံးဝအသစ်ကြီးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော် သူ့အတွက်တော့ gay စစ်စစ်ကြီးကိုဖြစ်လို့။
ဘိုဘို့ကိုငမ်းဖို့ အခွင့်ကောင်းတွေနှင့် ရက်များစွာကို ကျော်ဖြတ်ခွင့် ကျွန်တော်ရပါတယ်။ အားကစားအချိန်ဆို ဘောင်းဘီတိုလေးနှင့် ခုန်ဆွခုန်ဆွလုပ်နေတဲ့ သူ့ကိုကြည့်ရင်း ကျွန်တော့်ပေါင်ခြံထဲက ညီဘွားက ခေါင်းထောင်ထရတာ မနည်းထိန်းရတယ်ဗျာ။ နောက် အတန်းချိန်တစ်ခုပြောင်းဖို့ သက်ပြင်းမောတွေမှုတ်ထုတ်ရင်းစောင့်ဆိုင်းရတာ မကြာခဏလေ။
Shit!!! ကျွန်တော် ခြေသံတစ်ချို့ကို ရုတ်တရက်ကြားလိုက်ရတယ်။ အ၀တ်လဲခန်းထဲ မသိမသာ ၀င်ရပ်နေတဲ့ ကျွန်တော် မသိမသာလျော့ရဲနေတဲ့ ဆီးစပ်က ဘောင်းဘီကိုဆွဲတင်လိုက်ရင်း နောက်ဖက်ကို လှည့်ရပ်လိုက်တယ် ဘိုဘိုလျောက်လာတာကို မြင်ရရော။
သူ ကျွန်တော့်ဆီတည့်တည့်လှမ်းလာရင်း မေးတယ် “မင်း…. ဒီအနောက်ဘက်အခန်းထဲ ဘာလာလုပ်နေတာလဲ?” တဲ့။ ကျွန်တော် ဘာမှ တုန့်ပြန်ဖြေကြားမှုမပြုခဲ့။ စကားတုန့်ပြန်ပြောဖို့ထက် တံတွေးကို အကြိမ်ကြိမ်အခါခါ မျိုချနေရတာကိုး။ ကျွန်တော်ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဘယ်လိုမှ မထိန်းနိုင်ခဲ့တာ အမှန်ပဲ။ တဖြည်းဖြည်း သူနှင့်နီးကပ်လာရတာကပဲ ရင်အခုန်ဆုံး။
သူကျွန်တော့် ပခုံးကိုကိုင်ကာ အ၀တ်ဘီရိုနဲ့ဆွဲကပ်လိုက်ရင်း အော်ဟစ်တဲ့အသံနီးပါး “မင်းကို စာသင်ခန်းထဲမှာကတည်းက သတိထားမိ နေတာ….မင်းက gay လား ဒါမှမဟုတ် ဘာလဲကွ?” လို့ပြောရော။
ကျွန်တော်ဘာပြောရမှန်းမသိ စဉ်းစားမရဖြစ်နေချိန်နှုတ်ဖျားကတော့ “ကျွန်တော်…..ကျွန်တော်က bi” ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလည်း ဘာလုပ်ရ မှန်းမသိ သူ့မျက်နှာကိုကြည့်တော့လည်း နီရဲဒေါသထွက်နေသလိုဖြစ်ပေမယ့် ဒီထက်ပိုမပြောင်းလဲပြန်ဘူးဗျ။ ကျွန်တော်လည်း သူ့ မျက်နှာကိုမကြည့်ရဲတော့တာကြောင့် အကြည့်ကို အောက်ဘက်ရွှေ့လိုက်တာ မယုံနိုင်စွာ ခပ်တိုတို အားကစားဘောင်းဘီခွကြားက သူ့ငပဲဟာ လေရှူနေရော။ ဘာမဆိုင်ညာမဆိုင် ကျွန်တော့်ညီဘွားက ရုတ်တရက် တင်းကနဲခေါင်းထောင်ထလာပါတယ်။
ကျွန်တော် အဲ့ဒီမြင်ကွင်းကို စက္ကန့်အနည်းငယ်ငေးနေမိပြီး မျက်နှာကိုပြန်အမော့မှာတော့ ကျွန်တော့်နှုတ်ခမ်းသားတွေကို အားရပါးရ စုပ်နမ်းတာကို ခံလိုက်ရပါတော့တယ်။ ပြီးတော့ “ မင်းကြည့်ရတာ အံ့အားသင့်သွားပုံရတယ်။ ငါလည်း bi တစ်ယောက်ပဲ။ သိတယ်ဟုတ်!” တဲ့သူကပြောသည်ပေါ့နော်။
“ခင်ဗျား….ကျွန်တော့်ကိုနောက်နေတာလား? ကျွန်တော် အဲ့လောက်ကံမကောင်းနိုင်ပါဘူး”
“ကောင်းပြီ၊ ဒီဟာကြီးကတော့ ယုံမှာပါ” သူ ကျွန်တော့်ငပဲခပ်တင်းတင်းကို လက်နှင့် အသာအုပ်မိုးဖမ်းကိုင်လိုက်ရင်းပြောတာပါ။ “ မင်း ဒီအနောက်က အခန်းထဲလာပြီး လက်ကစားနေတာ ငါမြင်ပြီးသား….အခု မင်းဇာတ်လမ်းဆုံးအောင် ကူညီပါရစေ”
ဘိုဘို ကျွန်တော့်ရှေ့တည့်တည့်မှာ ဒူးထောက်ထိုင်ချလိုက်ကာ ကျွန်တော်ဝတ်ထားတဲ့ ဘောင်းဘီကို လျှောကနဲ ဆွဲချွတ်ချလိုက်ရောဗျ။ ကျွန်တော့်ငပဲထောင်မတ်နေတာကို ရွှန်းရွှန်းစားစားကြည့်ရင်း သုံးသပ်ချက်များစွာပြောတော့တယ်။ “မိုက်တယ်ကွာ….Wow! တော်တော် တုတ်ပြီး ရှည်တာပဲ” ဆိုတဲ့စကားက သူ့မှတ်ချက်တွေထဲကတစ်ခု။ သွေးတွေတဆတ်ဆတ်တိုးနေတဲ့ ကျွန်တော့်ငပဲကို သူ့နှုတ်ခမ်းသား တွေနှင့် ပွတ်ဆွဲပြီးနောက် သူ့အာခံတွင်းထဲထည့်လိုက်တယ်။ “Oh My god!!” သူ့လျှာကို မွှေရင်း ဘယ်လို-ုပ်နေလဲမသိဘူး။ ကျွန်တော် သူ့ခေါင်းကိုထိန်းကိုင်ရင်း ကျွန်တော့်ငပဲတစ်ချောင်းလုံး သူ့လည်မျိုထဲ ရောက်မတတ်ဖိသွင်းပစ်လိုက်တယ် မှတ်ကရော။ ကျွန်တော် အချိန်သိပ်ကြာကြာ မထိန်းနိုင်တော့ သူ့အပြုအစုမှာ သာယာပြီး သုက်ရည်အများအပြားကို ပန်းထည့်မိတော့တယ်။ “အား…..အ….ပြီး….ပြီးပြီ”
သူ…သူ ကျွန်တော့်ငပဲရဲ့ ကွမ်းသီးခေါင်းကို လျှာနဲ့ရစ်ဝိုက်ပြီး သန့်ရှင်းစေတယ်။ ပြီးတော့ သူ ထွေးမပစ်ဘူးဗျ။ သူလည်း မတ်တပ်ရပ် ကျွန်တော်လည်းလျှောကျနေတဲ့ ဘောင်းဘီကိုဆွဲတင်လိုက်စဉ် “အရမ်းမိုက်တယ်၊ဒီထက်ပိုလုပ်ချင်သေးတယ်ကွာ။ ကျောင်းဆင်းရင် ဒီလိပ်စာအတိုင်းလာခဲ့။ ငါ့မိဘတွေအိမ်မှာ မရှိလောက်သေးဘူး” တဲ့သူကပြောတယ်။ ကျွန်တော့်ကို သူ့ကျောပိုးအိတ်ထဲက တစ်သျှူး တစ်ချို့နဲ့အတူ လိပ်စာကဒ်တစ်ခုပေးပြီးထွက်ခွာသွားပါရဲ့။ သူ့ပေါင်ခြံဆီတစ်ချက်ကြည့်လိုက်မိတော့ ဘောင်းဘီမှာ pre-cum တွေက ရွှဲစိုလို့ ပေါင်တံကနေတစ်ဆင့် မြေပြင်ကိုတောင် တစ်စက်စက်ကျနေသလိုပဲ။
အိုး…အိုး….မိုင်ဂေါ့….ကျွန်တော်ဘယ်လိုမှ ယုံလို့မရနိုင်သလိုကိုဖြစ်နေ ခံစားမိနေပါတယ်။ ဘိုဘိုတစ်ယောက် ကျွန်တော့်ကို blow-job လုပ်ပေးသွားတာ တကယ့်ကို ရူးသွပ်သွားသလားပဲ။ ကျွန်တော် ကျောင်းဆင်းချိန်တွေကုန်ဆုံးဖို့ကိုတောင် တော်တော်ကြာကြာစောင့်ရ သလားထင်နေမိပါတယ်။ ကျွန်တော် တော်တော့်ကို စိုးရိမ်မကင်းစိတ်တွေဝင်နေခဲ့သလိုခံစားရတယ်ဗျ။ သူ…..ကျွန်တော်နှင့် ဘာများထပ် လုပ်ချင်နေသေးသလဲ တော်တော်သိချင်နေမိပါတယ်။ ကျောင်းဆင်းဖို့ သုံးနာရီလောက်စောင့်ရတာကို နှစ်များစွာစောင့်နေရသလိုပဲ ကျောင်းဆင်းဘဲလ်တီးတာနှင့် ဘိုဘိုတို့အိမ်ရှိရာကို စထွက်တော့တာ။
လိပ်စာအတိုင်းရှိတဲ့အိမ်ကိုရောက်ဖို့ မိနစ်နှစ်ဆယ်လောက်ပဲကြာတယ်။ ဒါပေမဲ့ သွားရာလမ်းမှာ ကျွန်တော့်ပေါင်ကြားက ငပဲက တဖြည်းဖြည်းမာတောင့်လာတာ အိမ်ကိုလည်းမြင်ရော မာတောင့်လွန်းလို့ နာတောင်နာတယ်။ ဘိုဘိုပြောထားတဲ့ အိမ်မကြီးဘေးက လမ်းကြားလေးထဲလျှောက် တံခါးချပ်လေးကို ခပ်သာသာလေးခေါက်လိုက်တော့ တံခါးက ခပ်ဖြည်းဖြည်းဟလာတယ်။ ၀ိုး…..ဘိုဘို အ၀တ်မပါ ဗလာကိုယ်ထီးနှင့် ရပ်နေတာ သူ့ငပဲကြီးက ကျွန်တော့်ကိုအမြှောက်နဲ့ချိန်ထားသလိုပဲ။ ကျွန်တော့်ပခုံးနှစ်ဖက်ကိုဆွဲကိုင် နှုတ်ခမ်းသားတွေကို ခပ်ကြမ်းကြမ်းစုပ်မျိုနမ်းရှုံ့တော့တာ…။ သူ့ဒစ်က အနည်းဆုံး ၇လက်မလောက်ရှိမယ် လုံးပါတ်ကလည်း အားရစရာ။ တော်တော် သည်းထိပ်ရင်ဖိုစရာဖြစ်ပေမယ့် ကျွန်တော် စိတ်မှန်းနဲ့တိုင်းထွာမိပြီးသားဖြစ်နေရော။
ကျွန်တော် သူ့ငပဲဆီလက်ရောက်သွားချိန် သူ့လက်ကလည်း ကျွန်တော့်ငပဲကို ဘောင်းဘီထဲလက်လျှိုနှိုက်တယ်။ ရှပ်အင်္ကျီကိုချွတ် ဘောင်းဘီကိုပါ ဖယ်လိုက်ချိန်မှာတော့ ဘိုဘိုရယ်လေ ပထမအကြိမ်တုန်းကလိုပဲ ကျွန်တော့်ငပဲကိုအားရပါးရကိုင်ပါရော။
“ဘယ်လို ကျွန်တော့်ငပဲကိုကြိုက်လို့? ကျွန်တော်က ခင်ဗျားငပဲ အရှည်ကြီးကို သဘောကျနေတာဗျ ဘိုဘိုရ” သူဘာမှပြန်မပြော ကျွန်တော့်ငပဲကိုဆွဲပြီး ရှေ့ကဦးဆောင်ခေါ်သွားတာက သူ့အိပ်ခန်းထဲ…..ကျွန်တော့်မှာ တရွတ်တိုက်လိုလို ဟတ်ထိုး ဟတ်ထိုးပါ သွားရတယ်။
“My God, He is hot!!!!”
Alex Aung (17 Sep 2013)
Posted by Alex Aung at 6:23 AM No comments:
Posted by Alex Aung at 7:13 AM No comments: